people Nepal » मौसम खबरः पश्चिम र मध्यका पहाडी भेगमा हिमपात हुने ! मौसम खबरः पश्चिम र मध्यका पहाडी भेगमा हिमपात हुने ! – people Nepal
मौसम खबरः पश्चिम र मध्यका पहाडी भेगमा हिमपात हुने !
Posted on January 20, 2020 by Durga Panta
काठमाडौं, ६ माघ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा पश्चिमी न्युन चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ । हाल देशको पूर्वी भूभागमा सामान्य बदली रहेको र अन्य पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको विभाग अन्तरगतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
तराईका भूभागहरूमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ । महाशाखाले निकालेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन अनुसार आज दिउँसो पश्चिमी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ भने देशका मध्य र पूर्वी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ ।
पश्चिम र मध्यका उच्च पहाडी भेगमा हल्कादेखी मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ । सोमबार राति देशका पश्चिमी भूभाग लगायत मध्य र पूर्वी पहाडी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ । पूर्व र मध्यका तराई भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।
मध्य र पश्चिमी उच्च पहाडी भेगमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । उच्च हिमाली भेगमा हल्का हिमपात हुने साथै तराईका केही स्थानहरुमा हुस्सु र कुहिरो समेत रहने भएकोले चिसोबाट बच्न मौसमविद्ले अनुरोध गरेका छन् ।